जाने होइन टेम्केडाँडा ?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
पुस २५, २०७४ विद्या राई
काठमाडौँ — भोजपुर र खोटाङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने टेम्केडाँडा र चखेवाभञ्ज्याङ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित हुँदै गएका छन् । टेम्के समुद्री सतहदेखि २९९५ र चखेवाभञ्ज्याङ २३०८ मिटर उचाईमा पर्छन् ।
चखेवाभञ्ज्याङ हुँदै गएको भोजपुर–खोटाङ जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्ग पछिल्ला वर्षमा स्तरोन्नती हुन थालेपछि यातायातको सहज पहुँच विस्तारसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिन थालेका स्थानीयहरु बताउँछन्। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व बोकेको टेम्के पर्यटनका लागि प्रचूर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा थियो। सडकको पहुच र प्रचारप्रसारले गर्दा पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। यहाँबाट बिहानीको सूर्योदय, बेलुकीको सूर्यास्त, भारत तथा चीनका भूभाग, डाँडाकाँडाहरु हेर्न सकिन्छ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७४ १८:०८
पुस २५, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — प्रहरीले उपचारका लागि डा. गोविन्द केसीलाई वीर अस्पताल लगेको छ ।सर्वोच्च अदालतमा आज केसीको बयान सकिएपछि केसीलाई अस्पताल लगिएको हो ।
अदालतको मानहानी मुद्दामा डा. केसीलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरी आज अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतले डा. केसीसँग आज बयान लिएको हो ।
अदालतले केसीको बयानको आधारमा भोलि बहस गर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले सोमबार दिउँसोदेखि अनसन सुरु गरेका थिए । लगत्तै उनीमाथि अदालतमा मानहानीको आरोप लागेको हो ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७४ १७:५६